प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहको विरोध प्रदर्शन (फोटो फिचर) « MNTVONLINE.COM
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहको विरोध प्रदर्शन (फोटो फिचर)
काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको छ । यही पुस ७ देखि ९ गतेसम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदर्शनमा नेकपाका शीर्ष नेता सहभागी भएका छन् । भृकुटीमण्डपबाट शुरु भएको प्रदर्शनमा शहीदढोका, वीर अस्पताल, रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक हुँदै भृकुटीमण्डपमा आई सभामा परिणत हुने भएको छ । प्रदर्शनमा पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत शीर्ष नेताको सहभागिता छ ।
तस्बीर : हिमाल जोशी/ एमएनटिभी
मोरङ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का केन्द्रीय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आगामी निर्वाचनमा संवैधानिक राजसंस्था र धर्म सापेक्षता पार्टीको मुख्य एजेण्डा हुने बताएका छन् । विराटनगरमा
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरको बैंकको आइपिओमा १८ अर्बको आवेदन !
राजतन्त्र फर्काउन संसद् विघटन : अध्यक्ष दाहाल !
ओरिजिनल एमाले केपी होइनन्, म हुँ : माधव नेपाल !
प्रजातन्त्र धरापमा पर्यो, अब राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ : राप्रपा अध्यक्ष लोहनी
प्रदेश सरकारले शिर ठाडो हुनेगरी काम गरिरहेको छ : मुख्यमन्त्री पाैडेल